Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Fihanaky ny valan’aretina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Fihanaky ny valan’aretina
Mihazakazaka ilay coronavirus ary mahavita dingan-dava mihitsy aza araky ny fahitana azy mipoitra tampoka sady any avaratra-andrefana toy ny any Mahajanga no hatrany atsimo lavitra any amin’iny faritra atsimo-atsinanana iny, any Vangaindrano. Tsy manana tongotra ahafahany mihazakazaka na elatra ahafahany manidintsidina irery ilay otrik’aretina, hany fomba fiparitahany dia manaraka olona izay efa itoerany.
Matetika dia na efa itoerany aza dia mbola tsy mandamaka marary noho izay ilay olona mitarika virus manaraka azy ity ahafahany miampita amin’ny olon-kafa ka arak’izay ny fomba manafaingana ny fihanak’ilay aretina Covid-19. Ilay olona mitrotro tsy satry sady tsy mahafantatra ny tenany ho mpitatitra aretina dia eny am-pizorana isaky ny mandalo tanàna ka mifampikasokasoka amin’ny mpiray monina no efa mamafy ilay biby mitera-doza. Nahitana tranga toy izany tao Brikaville ary izany koa no miteraka fahasahiranana ho an’ny mponin’i Moramanga izay kihon-dàlana avy any Toamasina. Mbola olona nivahiny tao anivon’ny fianakaviana monina ao Manarintsoa ihany koa no namindra tamin’ny olona 16 mpiray monina manodidina tao.
Ny fisehon’ny fihanak’ilay valanaretina dia ahitana tsara ireo fanao na fihetsika na fomba izay tsy maintsy fadina na atao hoe zava-nahazatra hatry ny ela aza. Tsy hitsaratsara fahatany olona sanatria na hifanendrikendrika amin’ny fiampangana an’i rangahy itsy na ramatoa iry ho ninia nanitsaka fepetra noho ny haratsian-doha. Angamba ny anton’ny fihoaram-pefy dia noho ny tsy nahatafitana tsara ao an-tsaina ho didy fandraràna ilay fombafomba rehetra fantapantatra ho mamoafady. Na ny tena izay miresaka izany aza anie raha itanisa eto ireo fihetsika voarara dia tsy mahatoky tena fa mety manadino satria tsy namerinmberina nianatra piliavava toy ny fahiny raha nampianarina ny didy folo. Na ny handahatra ireo fandrarana aza dia efa sahirana.
Iza no atao didy voalohany ?
Didy n°1 – Ho fiarovana ny tena dia fadio ny fomba mety hanaparitaka ilay tsimok’aretina.
Didy n°2 – Mihiboha an-trano ary fadio ny fandehanana any ivelany raha tsy manana antony tsy azo ialana.
Didy n°3 – Aza mifampikasokasoka amin’ny sasany, elanelano hatrany ny olon-kafa na eo am-piresahana aza.
Didy n°4 – Manaova aro-vava sy orona rehefa any ivelan’ny trano ary araka izay azo atao dia arovy ny maso.
Didy n°5 – Fadio arak’izay azo atao ny fandraisana zavatra izay raisin’ny maro, ary raha sendran’izay mety tsy tandrina sy ny tsy azo ihodivirana dia sasao matetika araka izay azo atao amin’ny rano madio sy savony ny tànana.
Didy n°6 – Na mievona na mikohaka dia ao anatin’ny kiho-tànana no anampenana ny fofon’aina tsy hiparitaka.
Didy n°7 – Fadio ny manisin-delo sy mandrora ivelan’ny fonosana (mosoara).
Angamba raha manontany tena momba ny fanajan’ny tena ny fepetra tsirairay eo am-pamakiana ny didy fito dia ampy ahatsiarovana na efa mafatra-po na tsia ny fomba fijoro araky ny maha olom-pirenena.